Fandraisan'anjaran'i Vargenau - Wikipedia
De Vargenau dinika Laogim-panakanana fampidiram-pejy laogy laogiim-panararaotana
31 Aogositra 2021
11:1531 Aogositra 2021 à 11:15 Fampitahana tant. +35‎ V Dinika:Caulaincourt, Aisne ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Caulaincourt, Aisne ho Dinika:Caulaincourt i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
11:1531 Aogositra 2021 à 11:15 Fampitahana tant. 0‎ k Dinika:Caulaincourt ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Caulaincourt, Aisne ho Dinika:Caulaincourt i Vargenau ankehitriny
11:1531 Aogositra 2021 à 11:15 Fampitahana tant. +28‎ V Caulaincourt, Aisne ‎ nanova ny anaran'i Caulaincourt, Aisne ho Caulaincourt i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
11:1531 Aogositra 2021 à 11:15 Fampitahana tant. 0‎ k Caulaincourt ‎ nanova ny anaran'i Caulaincourt, Aisne ho Caulaincourt i Vargenau ankehitriny
09:3431 Aogositra 2021 à 09:34 Fampitahana tant. +28‎ V Dinika:Braye, Aisne ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Braye, Aisne ho Dinika:Braye i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
09:3431 Aogositra 2021 à 09:34 Fampitahana tant. 0‎ k Dinika:Braye ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Braye, Aisne ho Dinika:Braye i Vargenau ankehitriny
09:3431 Aogositra 2021 à 09:34 Fampitahana tant. +21‎ V Braye, Aisne ‎ nanova ny anaran'i Braye, Aisne ho Braye i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
09:3431 Aogositra 2021 à 09:34 Fampitahana tant. 0‎ k Braye ‎ nanova ny anaran'i Braye, Aisne ho Braye i Vargenau ankehitriny
16:0817 Aogositra 2021 à 16:08 Fampitahana tant. +29‎ V Dinika:Archon, Aisne ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Archon, Aisne ho Dinika:Archon i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
16:0817 Aogositra 2021 à 16:08 Fampitahana tant. 0‎ k Dinika:Archon ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Archon, Aisne ho Dinika:Archon i Vargenau ankehitriny
16:0817 Aogositra 2021 à 16:08 Fampitahana tant. +22‎ V Archon, Aisne ‎ nanova ny anaran'i Archon, Aisne ho Archon i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
16:0817 Aogositra 2021 à 16:08 Fampitahana tant. 0‎ k Archon ‎ nanova ny anaran'i Archon, Aisne ho Archon i Vargenau ankehitriny
13 Aogositra 2021
13:1113 Aogositra 2021 à 13:11 Fampitahana tant. +30‎ V Dinika:Arandas, Ain ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Arandas, Ain ho Dinika:Arandas i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
13:1113 Aogositra 2021 à 13:11 Fampitahana tant. 0‎ k Dinika:Arandas ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Arandas, Ain ho Dinika:Arandas i Vargenau ankehitriny
13:1113 Aogositra 2021 à 13:11 Fampitahana tant. +23‎ V Arandas, Ain ‎ nanova ny anaran'i Arandas, Ain ho Arandas i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
13:1113 Aogositra 2021 à 13:11 Fampitahana tant. 0‎ k Arandas ‎ nanova ny anaran'i Arandas, Ain ho Arandas i Vargenau ankehitriny
07:2613 Aogositra 2021 à 07:26 Fampitahana tant. +30‎ V Dinika:Coligny, Ain ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Coligny, Ain ho Dinika:Coligny i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
07:2613 Aogositra 2021 à 07:26 Fampitahana tant. 0‎ k Dinika:Coligny ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Coligny, Ain ho Dinika:Coligny i Vargenau ankehitriny
07:2613 Aogositra 2021 à 07:26 Fampitahana tant. +23‎ V Coligny, Ain ‎ nanova ny anaran'i Coligny, Ain ho Coligny i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
07:2613 Aogositra 2021 à 07:26 Fampitahana tant. 0‎ k Coligny ‎ nanova ny anaran'i Coligny, Ain ho Coligny i Vargenau ankehitriny
26 Martsa 2021
09:0026 Martsa 2021 à 09:00 Fampitahana tant. +32‎ V Dinika:Asnières, Eure ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Asnières, Eure ho Dinika:Asnières i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
09:0026 Martsa 2021 à 09:00 Fampitahana tant. 0‎ k Dinika:Asnières ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Asnières, Eure ho Dinika:Asnières i Vargenau ankehitriny
09:0026 Martsa 2021 à 09:00 Fampitahana tant. +25‎ V Asnières, Eure ‎ nanova ny anaran'i Asnières, Eure ho Asnières i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
09:0026 Martsa 2021 à 09:00 Fampitahana tant. 0‎ k Asnières ‎ nanova ny anaran'i Asnières, Eure ho Asnières i Vargenau ankehitriny
17:201 Martsa 2021 à 17:20 Fampitahana tant. −10‎ k Mittelhausen ‎Aucun résumé des modifications
17:191 Martsa 2021 à 17:19 Fampitahana tant. +35‎ V Dinika:Mittelhausen, Bas-Rhin ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Mittelhausen, Bas-Rhin ho Dinika:Mittelhausen i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
17:191 Martsa 2021 à 17:19 Fampitahana tant. 0‎ k Dinika:Mittelhausen ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Mittelhausen, Bas-Rhin ho Dinika:Mittelhausen i Vargenau ankehitriny
17:191 Martsa 2021 à 17:19 Fampitahana tant. +28‎ V Mittelhausen, Bas-Rhin ‎ nanova ny anaran'i Mittelhausen, Bas-Rhin ho Mittelhausen i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
17:191 Martsa 2021 à 17:19 Fampitahana tant. 0‎ k Mittelhausen ‎ nanova ny anaran'i Mittelhausen, Bas-Rhin ho Mittelhausen i Vargenau
17:001 Martsa 2021 à 17:00 Fampitahana tant. −10‎ k Lohr ‎Aucun résumé des modifications
16:591 Martsa 2021 à 16:59 Fampitahana tant. +27‎ V Dinika:Lohr, Bas-Rhin ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Lohr, Bas-Rhin ho Dinika:Lohr i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
16:591 Martsa 2021 à 16:59 Fampitahana tant. 0‎ k Dinika:Lohr ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Lohr, Bas-Rhin ho Dinika:Lohr i Vargenau ankehitriny
16:591 Martsa 2021 à 16:59 Fampitahana tant. +20‎ V Lohr, Bas-Rhin ‎ nanova ny anaran'i Lohr, Bas-Rhin ho Lohr i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
16:591 Martsa 2021 à 16:59 Fampitahana tant. 0‎ k Lohr ‎ nanova ny anaran'i Lohr, Bas-Rhin ho Lohr i Vargenau
13:011 Martsa 2021 à 13:01 Fampitahana tant. −10‎ k Lampertheim ‎Aucun résumé des modifications
13:001 Martsa 2021 à 13:00 Fampitahana tant. +34‎ V Dinika:Lampertheim, Bas-Rhin ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Lampertheim, Bas-Rhin ho Dinika:Lampertheim i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
13:001 Martsa 2021 à 13:00 Fampitahana tant. 0‎ k Dinika:Lampertheim ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Lampertheim, Bas-Rhin ho Dinika:Lampertheim i Vargenau ankehitriny
13:001 Martsa 2021 à 13:00 Fampitahana tant. +27‎ V Lampertheim, Bas-Rhin ‎ nanova ny anaran'i Lampertheim, Bas-Rhin ho Lampertheim i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
13:001 Martsa 2021 à 13:00 Fampitahana tant. 0‎ k Lampertheim ‎ nanova ny anaran'i Lampertheim, Bas-Rhin ho Lampertheim i Vargenau
11:171 Martsa 2021 à 11:17 Fampitahana tant. +32‎ V Dinika:Ebersheim, Bas-Rhin ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Ebersheim, Bas-Rhin ho Dinika:Ebersheim i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
11:171 Martsa 2021 à 11:17 Fampitahana tant. 0‎ k Dinika:Ebersheim ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Ebersheim, Bas-Rhin ho Dinika:Ebersheim i Vargenau ankehitriny
11:171 Martsa 2021 à 11:17 Fampitahana tant. +25‎ V Ebersheim, Bas-Rhin ‎ nanova ny anaran'i Ebersheim, Bas-Rhin ho Ebersheim i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
11:171 Martsa 2021 à 11:17 Fampitahana tant. 0‎ k Ebersheim ‎ nanova ny anaran'i Ebersheim, Bas-Rhin ho Ebersheim i Vargenau
08:501 Martsa 2021 à 08:50 Fampitahana tant. −10‎ k Bust ‎ Bust ankehitriny
08:501 Martsa 2021 à 08:50 Fampitahana tant. +27‎ V Dinika:Bust, Bas-Rhin ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Bust, Bas-Rhin ho Dinika:Bust i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
08:501 Martsa 2021 à 08:50 Fampitahana tant. 0‎ k Dinika:Bust ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Bust, Bas-Rhin ho Dinika:Bust i Vargenau ankehitriny
08:501 Martsa 2021 à 08:50 Fampitahana tant. +20‎ V Bust, Bas-Rhin ‎ nanova ny anaran'i Bust, Bas-Rhin ho Bust i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
08:501 Martsa 2021 à 08:50 Fampitahana tant. 0‎ k Bust ‎ nanova ny anaran'i Bust, Bas-Rhin ho Bust i Vargenau
16:4027 Febroary 2021 à 16:40 Fampitahana tant. −10‎ k Kirrberg ‎ Kirrberg ankehitriny
16:4027 Febroary 2021 à 16:40 Fampitahana tant. +31‎ V Dinika:Kirrberg, Bas-Rhin ‎ nanova ny anaran'i Dinika:Kirrberg, Bas-Rhin ho Dinika:Kirrberg i Vargenau ankehitriny Marika: Fihodinana vaovao
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:Fandraisan%27anjara/Vargenau"